लगानीकर्तालाई यसरी ३२ अर्बको सेयर लाभ ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > पत्रपत्रिका > लगानीकर्तालाई यसरी ३२ अर्बको सेयर लाभ !
लगानीकर्तालाई यसरी ३२ अर्बको सेयर लाभ !
काठमाडौ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परेको पुँजी वृद्धिको चटारोले प्रतिफलको रुपमा लगानीकर्ताको हातमा भने २० महिनामा ३२ अर्ब रुपैयाँको सेयर परेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका ९६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बोनस सेयर दर्ता गराएका थिए ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको करिब ८ महिनामा यी तीनै वर्गका ६५ संस्थाले १४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बोनस सेयर दर्ता गराएका छन् । यी कतिपय कम्पनीको बोनस सेयर जारी भइसकेको छ भने केहीको प्रक्रियामा रहेका छन् ।
आव २०७२÷७३ को मौद्रिक नीति मार्फत् राष्ट्र बैंकले २०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी रु ८ अर्ब पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार २०७४ असारसम्ममा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले रु २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले रु १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले रु ५० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउँनुपर्छ ।
राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले पनि यो अवधिमा रु। ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले रु। ४० करोड पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।
पुँजी वृद्धिले परेन मर्जरमा दबाब, निर्देशनपछि मात्रै ४० संस्था बिलय
चुक्ता पुँजी वृद्धिको प्रारम्भिक लक्ष्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच मर्जर नै रहेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले समेत यो अडान छाडेपछि बैंकहरु स्वयं पुँजी वृद्धिमा लागे र यसको परिणाम बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा योग्य पुँजी अभावलाई पनि लिइएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार मर्जर विनियमावली २०६८ आएपछि २०७२ असारसम्ममा ७८ संस्थामध्ये ४८ संस्थाको विलय भएर ३० संस्थामा सिमित भएका थिए । तर, त्यसयता मर्जरमा दबाब नपुग्दा मर्जर विनियमावली २०६८ आएपछि २०७३ पुससम्ममा कुल १ सय ३० संस्थामध्ये ८८ संस्था विलय भएर ४२ मा सिमित भएको देखिन्छ । चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्देशन अघि ४८ संस्था विलय भएपनि निर्देशन आएको १८ महिनामा मात्रै ४० संस्था विलय भएका छन् ।
हुनतः चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने समयसीमा नजिकिदै जाँदा र बजारमा कर्जा योग्य लगानी अभावको समस्या चुलिदा थप संस्थाहरु मर्जर तथा एक्विजिशनमा जाँदै छन् । चालु आव अन्त्य हुँन बाँकी ४ महिनासम्ममा थप कति संस्था विलय हुने हुन त्यो भने समयले नै बताउँला । अनलाईनखबरबाट
प्रकाशित मितिः २०७३ फागुन २८
२०७३ फागुुण २८ गते ०९:०२ मा प्रकाशित
जान्नुहोस्,मोटर साइकल तथा मझौला सवारीको नयाँ लाइन्सेन्स बितरण प्रकृया कहिलेदेखि ?
फाईनान्सको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर पाउँदै हुनुहुन्छ,बुक क्लोजको मिति थाहा पाउनुहोस् !
आईएसले युरोप अमेरिकामा ‘डर्टी बम’ प्रहार गर्न सक्ने आशंका
बिमा कम्पनीले माग्यो पाँच पदमा १३ कर्मचारी
नेप्सेमा सूचिकृत यी २५ कम्पनीको एकै दिन साधारणसभा